w:es:indian ocean w:tr:Hint altkıtası w:it:Oceano Indiano Badweynta Hindiya (Af Ingiriis : Indian Ocean; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) waa badweynta sadexaad ee ugu wayn aduunka taasi oo dhacda bariga qaarada Afrika, koonfurta Aasiya ilaa galbeedka Badweynta Atlaantik. Badweynta Hindiya waxay ka mid tahay baddaha aduunka ugu waaweyn waxaayna u dhaxeysaa qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Ustareliya. Baaxada Badweynta Hindiya waxaa lagu qiyaasaa 73.481.000 km². Waxay ku xirantahay waqooyiga-galbeed, Marinka Gardafuul. Xudduudaha Badweynta Hindiya, oo ay soo diyaarisay Ururka Caalamiga ah ee Hormarinta Caalamiga ah 1953-kii, waxaa ka mid ahaa Badweynta Koonfureed laakiin maaha badaha xeebaha ee waqooyiga woqooyiga, laakiin sannadkii 2000 ayaa IHO waxay gooni u goosatay Badweynta Koonfureed si gooni ah, taas oo soo saartay biyaha koonfurta of 60 ° S badweynta Hindiya, laakiin waxay ku jireen xeebaha badweynta waqooyiga.  Meridionally, Badweynta Hindiya waxaa laga soo xigtay Badweynta Atlantic by 20 ° bariga Meridian, koonfurta koonfurta Cape Agulhas, iyo Badbaadada Baasifiga by meridian of 146 ° 55'E, koonfurta ka soo xigta koonfurta ugu fog ee Tasmania. Inta u dhaxaysa waqooyiga badweynta Badweynta Hindiya qiyaastii 30 ° waqooyiga Gacanka Ciraaq.